काठमाडौं– विश्व कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ । यही बेला यस्तो शीर्षकमा समाचार पढ्न सायदै कसैलाई महत्वको विषय वा चासोको विषय होला ।
तर, फरकधारले काठमाडौंमा केही व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गरेको छ । नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा आज तेस्रो दिन हो । यही दिन हामीले बानेश्वर वरपर केही व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गरेका थियौँ ।
हामीले गर्न खोजेको कुराकानी त लकडाउन अनुभवको थियो ।
तर, अधिकांश व्यक्तिहरु जसलाई हामीले भेट्यौँ, उहाँहरुले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालबारे कुराकानी गर्नुभयो । यो किन पनि होला भने बिहिबार विहानदेखि स्वास्थ्यमन्त्री सामाजिक सन्जालमा भाइरल छन् ।
कपिल काफ्ले खासमा चितवनका हुन् । तर, उनले काठमाडौंमा बस्न थालेको अब केही वर्ष भइसकेको छ । छोराछोरी र आफ्नै पनि भविष्यका लागि उनी काठमाडौं बस्न थालेको अब ८ वर्र्ष भइसकेको छ ।
बिहिबार दिउँसो उनी नयाँ बानेश्वरबाट पुरानो बानेश्वरतिर जाँदै थिए ।
‘घरमा पकाउने तेल सकिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर म तेल लिन हिँडेको । अहिलेसम्म पाएको छैन । म मुख्य सडकमा हिँडेकाले मात्र होला, केही पर जान्छु भनेर हिँडेको, यो लकडाउनमा केही भए पनि एक्सरसाइज हुने थियो ।’
उनले भनेजस्तै काठमाडौंका मुख्य सडकहरुमा नेपाल लकडाउनको तेस्रो दिन पनि सुनसान थियो । भित्र केही पसलहरु खुलेका छन् । तर, यो क्षेत्रमा बुधबार प्रहरीले माइकिङ गरेको थियो, राति २ बजेदेखि विहान ७ बजेसम्म मात्र पसल खोल्न भनेको छ ।
त, कपिलले यही कुरामात्र गरेनन् । उनी हातमा मोबाइल लिएर हिँडिरहेका थिए । उनले फेरि भने, ‘विश्वमा यत्रो महामारी लागेको छ, तर, हाम्रा स्वास्थ्यमन्त्रीले जे भनेका छन्, त्यसले उनको मुखमा सबैभन्दा पहिले महामारी लगाउनु पर्ने देखिएको छ ।’
अब जाऔँ, स्वास्थ्यमन्त्रीको मुख किन लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नेतिर !
किनकि उनी पछिल्लो समय जे बोलिरहेका छन्, त्यो हामीले सुन्न चाहेको कुरामात्र होइन, राष्ट्रकै लागि घातक छ ।
मन्त्रीले भनेका छन्, ‘पिपिई भान्सामा खाना पकाउन चाहिनेजस्तो भयो ।’
हो, भाइरल भिडियोमा यही अभिव्यक्ति सुन्न पाइन्छ । त्यसमाथि उनले त पिपिई भनेको त बल्ल सुनेका रहेछन् । अर्थात्, स्वास्थ्यकर्मीका लागि अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा उनले सुनेका रहेनछन् । उनले अर्थात् स्वास्थ्यमन्त्रीले ।
के यो गम्भीर कुरा होइन ? जसले देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणका लागि सबैभन्दा धेरै यस विषयमा चनाखो हुनुपथ्र्यो, उसैले यस विषयमा सुनेको छैन भन्न सुहाउँछ ?
यही कारण, हामीले भन्न छुटाउनु हुँदैन– थम्प्सडाउन स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू !
जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केललाई कोरोना !
एजेन्सी | चैत ९, २०७६
न्यूयोर्कमा कोरोनाबाट निधन भएका नर्सको बहिनीलाई चिठी– बआमालाई नभन्नू, आत्तिन्छन् !
नेपालमा भेटिए कोरोनाका चौथों संक्रमित